Akazisoli owashiya ubuthisha wangena ebhizinisini
AKASACABANGI ukubuyela emsebenzini wokuba nguthisha, uNkk Bajabulile Bhengu osenebhizinisi lokuthutha izivakashi, obuye abe yiTour Guide Isithombe: FACEBOOK
ZANELE MTHETHWA | January 9, 2020
UBEBUYE alukhumbule usuku lokuhola emsebenzini esanda kuqala ibhizinisi, owesifazane osedlondlobele kwezokuthutha izivakashi.
UNkk Bajabulile Bhengu (58) waseMzinyathi eNanda, ungumnikazi wenkampani yokuthutha iSBRM Tours, esisabalele nakwezinye izifundazwe. Washiya umsebenzi wokuba nguthisha esesebenze iminyaka engu-23, wakhetha ibhizinisi akulo.
Kwakungu-2006 engena ebhizinisini kodwa eqhubeka nomsebenzi wokuba nguthisha. Emuva kwendumezulu yeNdebe yoMhlaba yebhola ngo-2010, wabona ibhizinisi lenza kahle, wakhetha ukusula emsebenzini wobuthisha ngo-2012.
“Ngake ngazisola sengishiye umsebenzi, ngabona sengathi ngithathe ngehaba, ngibona u-2010. Ngangingazitshelanga ukuthi kuzobuye kuthi cwaka kuleli bhizinisi ngoba lihamba ngezikhathi. Bekuthi uma sekuthule ebhizinisini, ngiwukhumbule umhla ka-15 wokuhola,” esho ehleka.
Nokho uNkk Bhengu uthi akasaziphuphi ebuyela emsebenzini ngoba umgogodla usuqinile ebhizinisini.
Echaza ngalo uthe waliqamba ngamagama akhe wonke nesibongo sasekhaya, okunguSiyethemba Bajabulile Ruth Mchunu. Ngesikhathi eqala ibhizinisi wayenezimoto ezimbili, okumanje seziyisihlanu okubalwa namatekisi amabili.
“Ngangena kuleli bhizinisi ngoba ngibona ukuthi kuyashoda kwezokuthutha izivakashi. Kumanje kusakhonya abesilisa nabelungu kuleli bhizinisi. Ngangiziyela ehhotela ngiyobheka okunye ngesikhathi ngizwa ngendaba yokuthi kufuneka abantu abazothutha izivakashi, kulungiselelwa iNdebe yoMhlaba,” kusho uNkk Bhengu.
Uthe wasizwa yiDurban Tourism neTourism KZN (TKZN), ukumcathulisa ebhizinisini. Waba yingxenye yosomabhizinisi abancane abafakwe ngaphansi kohlelo lokucathuliswa nokuxhaswa ezinhlelweni zeTKZN.
Uke wathola ngisho indondo kumaLilizela Tourism Awards, waba sembukisweni Indaba, wabuye wakhethwa ukuyomela isifundazwe ohlelweni lwabeSouth African Tourism.
Ukuthutha izivakashi kumphoqe ukuthi afundele nokuba yiTour Guide, ukuze akwazi ukuzichazela ngezindawo. Uthe ubone esephakathi kuleli bhizinisi ukuthi ubevele enothando lokuvakasha.
“Ngesikhathi ngiwuthisha, bekuthi uma sivakashe nezingane zesikole, kube yimina engizichazela ngezindawo. Bengiqinisekisa ukuthi uma sidlula endaweni ethize ngiyazichazela ngisho nangomgwaqo.
“Lokhu kungisizile ngoba kwenze waba lula nomsebenzi wami wokuba yiTour Guide,” echaza.
Yize enabashayeli abasebenza ngokwezinkontileka, uNkk Bhengu usazibambela ekushayeleni.
Njengoba bekungamaholidi kaKhisimusi ubehlezi esemgwaqweni. Uthe uyakujabulela ukuba semkhakheni wokusebenza ngezivakashi. Kudingeka aqine kulo msebenzi njengoba ebuye ashayele amahora amade, ahlale nasemicimbini elinde izivakashi.
Uthe okumsizayo wukuthi unezingane ezikhulile, ezingahluphi ngokumkhalela.
Ngaphandle kokuhambela zonke izindawo KwaZulu-Natal, useke waya naseSwatini. Ufisa ukuthi ibhizinisi lingene eLesotho, Botswana naseZambia. Ubusiswe ngezingane eziyisihlanu, okukhona namawele, elinye usebenza nalo ebhizinisini.